Iemena - Wikipedia
I Iemena dia firenena ao Atsinanana Akaiky, any Azia, ao amin’ ny tendro atsimo-andrefan’ ny Saikanosin' i Arabia sady manana morontsiraka ao amin’ ny Ranomasina Mena sy ao amin’ ny Hoalan’ i Aden. Ny renivohiny dia i Sana'a. Mirefy 527 829 km2 ny velaran-taniny ary mùiisa 23 833 000 ny isan' ny mponina ao aminy araka ny fanisana natao tamin' ny taona 2011. Ny faritr' ora dia +3.
Sainan' i Iemena
Sarin-tany maneho an' i Iemena eo anivon' izao tontolo izao
Sarin-tanin' i Iemena
Ao atsimo dia ahitana lemaka amorontsiraka somary tery izay manana halava mirefy 1 900 km manamorona ny Hoalan’ i Aden; ao andrefana ny dia ahitana ny lemaka amorontsirak’ i Tihâmah izay be fasika sady karankaina. Any anaty tany kokoa, eny afovoan’ ny tany lemaka, no hitana tendrombohitra sy lembalemba avo. Midina ny vohon-tany rehefa mankany amin’ ny sisin-tany ao avaratra-atsinanana (mankany Arabia Saodita sy any Ômana) ary tany efitr’ i Ar Rub‘ al Khal no hita any.
Ny mponina any Iemena dia mivangongo kokoa ao amin’ ny tapany atsimo sy andrefan’ io firenana io. Ny vahoaka an-tendrombohitra sy amin’ ny morontsiraka atsimo dia Arabo, fa ny ao amin’ ny tany lemaka amorontsiraka andrefan’ i Tihâmah dia manam-piaviana arabo sy afrikana. Saika ny mponina any Iemena manontolo dia manaraka ny finoana silamo. Ny fiteny arabo no fiteny ôfisialy ao Iemena.
Miompana amin’ ny fambolena ny toekaren’ i Iemena (na dia eo aza ny faritra misy azy sy ny toetany izay tsy dia tsara ho an’ ny fambolena), nefa ny fitrandrahana solitany dia mitombo hatrany nanomboka tamin’ ireo taona 1980.
Teraka tamin’ ny taona 1990 i Iemena ankehitriny, tamin’ ny alalan’ ny fitambaran’ ny Repoblika Demôkratika Entim-Bahoakan’ i Iemena (ao atsimo) sy ny Repoblika Arabon’ i Iemena (ao Avaratra).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Iemena&oldid=1046055"
Dernière modification le 29 Jiona 2022, à 10:30
Voaova farany tamin'ny 29 Jiona 2022 amin'ny 10:30 ity pejy ity.